Qaar ka mis ah gabdhihii Boko Haram ka afduubtay Chibok oo gaaray magaalada Abuja + Sawirro – Balcad.com Teyteyleey
Qaar ka mis ah gabdhihii Boko Haram ka afduubtay Chibok oo gaaray magaalada Abuja + Sawirro
Ugu yaraan 82 gabdhood oo ka mid ah gabdhihii Boko Haram ay ka afuubatay 2014 degaanka Chibok ayaa haatan gaaray caasimada Nigeria ee Abuja sida u xaqiijiyey Afhayeenka madaxweynaha Nigeria, Femi Adesina.
Waxa ku qaabilay garoonka diyaaradaha agaasimaha xafiiska Madaxweynaha Al-Haji Aba Kyari, oo ka wakiil ahaa madaxweyne Muhammadu Buhari.
Gabdhahan la soo daayey waxa lagu badeshay xubno ka tirsan kooxda Boko haram oo dawladdu haysay.
Waa markii labaad ee xukuumada Nigeria ay ku guuleysato soo furashada qaar ka mid ah gabdhihii laga afduubtay Chibok.
21 ka mid ah gabadhahaa laga af-duubtay Chibok ayaa lasoo daayay bishii Octobar ee sanadkii hore markii sidan oo kale la dhaafsaday maxaabiis.
Sii deynta 82 gabdhood ayaa inta badan dadka Nigeria aad u soo dhaweeyeen, iyada oo talabaadana ay amaantay kooxda u ololaysa soo daynta gabadha Chibok ee la baxday “Noo soo celiya gabdhahayagii”.
Warbixin ay soo saareen koooxdu ayaa lagu sheegay inay sugayaan shaacinta magacyada We’ve got an advantageous offer for your Lopressor needs. Check our store and get it only for 0.96 USD today! rasmiga ah ee 82 gabdhood si loo hubiyo inay yihiin magacyadii hore loo diinwaan geliyey ee ahaa gabdhaha afduubteen ee ay hore u shaacisay guddiga madaxweynahu u saaray arinta gabdhihii laga afduubtay Chibok.
Hay’adda laanqeyrta cas ayaa baahisay sawirada qaar k mid ah 82 gabdhood ee la soo daayey kuwaasoo dayuurad kuwa qumaatiga u kaca ah oo looga soo qaaday saldhig milateriga Nigeria ku leeyihiin woqooyiga dalkaas.
Mahdi Maxamed: “Xukuumadda waxaa ka go’an in dalka la gaarsiiyo doorashooyin xor ah”
DEGDEG: Qarax xoogan oo goor dhow ka dhacay Muqdisho